पाँच वर्षभित्र होन्डाले १० नयाँ विद्युतीय चार पाङ्ग्रे सार्वजनिक गर्ने :: एजेन्सी :: Setopati
पाँच वर्षभित्र होन्डाले १० नयाँ विद्युतीय चार पाङ्ग्रे सार्वजनिक गर्ने
नयाँ दिल्ली, कात्तिक १
होन्डाले विश्व बजारमा नयाँ विद्युतीय सवारी साधन सार्वजनिक गर्दैछ। जापानी अटो निर्माता होन्डाले अबको पाँच वर्षभित्र चिनियाँ बजारमार्फत १० नयाँ विद्युतीय सवारी निर्माण गर्ने घोषणा गरेको हो।
कम्पनीले हालै दुई नयाँ विद्युतीय गाडी सार्वजनिकबारे घोषणा गरेको छ भने तीन नयाँ अवधारणाबारे पनि खुलासा गरेको छ। होन्डाले चिनियाँ बजारमा ईःएन सिरिजबाट नयाँ विद्युतीय गाडीको ब्रान्डिङ गर्नेछ। 'ईः' ले कम्पनीको विद्युतीय प्रविधिलाई प्रतिनिधित्व गर्छ। र, एनले नाउ एन्ड नेक्स्ट भन्ने अर्थ दिन्छ। अर्थात् कम्पनीको 'अहिले र पछि'सम्मको नयाँ योजनाहरूलाई जनाउँछ।
ईःएनएस१ र ईःएनपि१ ईःएन सिरिजअन्तर्गत सार्वजनिक हुने होन्डाको पहिलो दुई मोडल हुन्। यी मोडलहरू एचआर–भीमा आधारित छन् भने सन् २०२२ को मध्यतिर सार्वजनिक हुने तयारीमा छ।
होन्डाले एचआर–भी रेन्जको गाडी डगफेङ्ग होन्डा र जिएसी होन्डाको संयुक्त मिलेमातोमा सार्वजनिक गरेको हो। यी गाडीहरू होन्डाको सबैभन्दा नयाँ प्रविधिमा आधारित छन्।
ईःएन सिरिजका विद्युतीय गाडीहरूको बाहिरी आवरण निकै सानदार छन्। कम्पनीले यसमा विशेष प्राथमिकता दिएको छ। गाडीहरू स्पोर्टी हुनुका साथै यसमा चालकले आरामदायी ड्राइभिङ अनुभव पाउनेछन्।
त्यस्तै कम्पनीको तीन नयाँ अवधारणाको मोडल ईःएन कुप, ईःएन एसयुभी र ईःएन जिटी हुन्। यी मोडलका गाडीहरू पनि अबको पाँच वर्षभित्र सार्वजनिक हुनेछ। यी मोडलहरूमा ईःएनएस१ र ईःएनपी१ भन्दा बढी क्षमता हुने अनुमान लगाइएको छ। यसबाहेक कम्पनीले अबको पाँच वर्षमा १० नयाँ विद्युतीय सवारी साधन निर्माण एवम् सार्वजनिक गर्ने बताइएको छ।
होन्डाको योजनासँगै यसको प्रतिस्पर्धी कम्पनी टाटा मोटर्सले पनि अबको केही वर्षमा १० वटा नयाँ विद्युीय सवारी निर्माणबारे घोषणा गरेको छ। त्यस्तै महिन्द्रा एन्ड महिन्द्रा र मारुती सुजुकीले पनि विद्युतीय सवारी निर्माण क्षेत्रमा तीव्र गतिले काम बढाउँदैछ।
यसबाहेक होन्डा यतिबेला सिटी हाइब्रिड सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छ। कम्पनीले सिटी हाइब्रिड सन् २०२२ सम्ममा सार्वजनिक गर्ने बताएको छ। र, यो भारतको सबैभन्दा कम पेट्रोल खपत गर्ने गाडी हुनेछ। त्यस्तै भारतीय अखबार अटो हिन्दुस्तानका अनुसार कम्पनीले सन् २०२३ सम्ममा भारतीय बजारमा मध्यम आकारको एसयुभी सार्वजनिक गर्नेछ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, कात्तिक १, २०७८, ०७:३८:१६
यस्तो विश्वविद्यालय जहाँका विद्यार्थीलाई भनिन्छ 'खोजी', एकलव्यबाट प्रभावित छ सिकाइ
नाडाको अध्यक्षका लागि प्यानलसहित चुनावी मैदानमा उत्रिँदै करण चौधरी
स्प्राइटले दियो ४ विजेतालाई बजाज पल्सर बाइक
टिभिएसको नयाँ अपाचे आरटिआर–२०० ४भी सार्वजनिक, कति पर्ला मूल्य?
यस्तो छ बिएमडब्लुको नयाँ विद्युतीय ‘कन्सेप्ट एक्सएम’
भोलि सार्वजनिक हुँदै स्कोडा नयाँ करोक एसयुभी, के छन् विशेषता?
रोयल इन्फिल्डको स्क्राम–४११ कहिले होला सार्वाजनिक?
यस्तो विश्वविद्यालय जहाँका विद्यार्थीलाई भनिन्छ 'खोजी', एकलव्यबाट प्रभावित छ सिकाइ विजयमणि पौडेल